पिलेट्स व्यायाम प्रणाली - यो के हो?
खेल र फिटनेस, पिलेट्स
एक स्वस्थ शरीर - कि के मुख्य कुरा अब। फिट र बलियो मांसपेशीमा मात्र होइन सुन्दर हेर्न मदत, तर पनि स्वस्थ हुन! यस्तो एरोविक्स, फिटनेस, योग र पिलेट्स रूपमा विभिन्न वर्गहरू, यो ठूलो सहायता। तर धेरै प्रश्न खडा: - पनि "पिलेट्स के छ?", धेरै, धेरै शङ्का छन् यसको उपयोगिता र आवश्यकता बारे क्रोधित बहस हो, र अझै सम्म एक indisputable तथ्य छ: पिलेट्स - यो तपाईं सधैं सुन्दर र स्वस्थ हुन मदत गर्नेछ के छ।
पिलेट्स: यो के हो?
त्यसैले, यो प्रश्नको जवाफ गर्न, यो आवश्यक आफ्नो तरिका दिशा मा यो अद्वितीय इतिहास थाहा छ। प्रारम्भिक उन्नाइसौँ शताब्दीमा निर्माता विधि भयो यूसुफ पिलेट्स। उहाँले एकल प्रणाली, प्रभावकारी फिर्ता मांसपेशिहरु, लचीलापन, पेट मांसपेशीमा, र थप बलियो विकास गर्न मद्दत गर्छ जसमा कल्याण योग र एरोविक्स को तत्व संयोजन गर्ने निर्णय गरे। त्यसैले पिलेट्स - के छ? यसलाई विकास र फिर्ता मांसपेशिहरु को गहिरो मांसपेशीमा बलियो बनाउन डिजाइन गर्दै छन् अभ्यास को एक प्रणाली छ। मुख्य कुरा कक्षाहरू सुस्त, शान्त गति मा आयोजित र यसलाई आराम गर्न मात्र होइन तर पनि प्रयास र समस्या बाट भाग्न मद्दत गर्छ छन् भन्ने छ।
मिथक र तथ्य
पिलेट्स - यो के हो? यस खातामा, धेरै मिथक र तथ्य हो। उदाहरणका लागि, मिथक एक दाबी गर्ने पिलेट्स सिस्टम - यो योग भन्ने जस्तै हो। होइन, कुनै र कुनै फेरि। एक योग डिजाइन र शरीर र प्राण को ज्ञान मा माहिर रूपमा यो, एकदम फरक निर्देशनहरू छ। एक धर्म, शरीर मन्दिरको पूजा - यो छ। थप रोजगारीको पृथ्वी प्रकारको तल - पिलेट्स नै छ। यहाँ जोड उचित साँस र मांसपेशीमा को उचित, क्रमिक सुदृढ छ।
केही मानिसहरू मांसपेशीमा लागि सबै भन्दा राम्रो अभ्यास कार्डियो हो, उठबस र किनभने छिटो गति मा चलिरहेको पिलेट्स प्रभावकारी नहुन सक्छ भन्छन्। यो गलत धारणा हो। पिलेट्स धेरै छिटो छ र थप कुशलतापूर्वक शरीर लचीलापन, प्रेस, को मेरुदण्ड गतिशीलता को हड्डीको घनत्व र यति मा विकास गर्न मद्दत गर्छ। र कि यो सिस्टम वजन गर्न मदत गर्छ? दुर्भाग्यवश, नकारात्मक यो प्रश्नको जवाफ। होइन, यसलाई बोसो बल्न को प्रक्रिया सानो योगदान पुग्छ। यसो गर्न तपाईं कार्डियो, छैन पिलेट्स भेट्नुपर्छ हुनेछ। उदाहरणका लागि, अध्ययन स्कूल घण्टा मात्र वजन चाहनेहरूलाई लागि पनि सानो छ 170-250 क्यालोरी, बल्छ कि दस्तावेज छन्। तर मानिसहरूले मांसपेशिहरु पाउन चाहने लागि, यो सिस्टम सबै भन्दा राम्रो हुनेछ! साथै, कक्षाहरू हृदय रोग, र गर्भवती महिलाहरु संग मान्छे को लागि उपयुक्त हो।
को पिलेट्स प्रणालीमा व्यायाम को लाभ
पिलेट्स अभ्यास के हो? को मेरुदण्ड को गतिशीलता विकास गर्न मद्दत गर्छ जो यो सिस्टम, हड्डीको घनत्व विकास गर्न, छोटो अवधिमा आफ्नो मुद्रा align, आफ्ना सबै मांसपेशीमा बलियो आफ्नो शरीर महसुस, साथै प्राप्त फिर्ता दुखाइ को छुटकारा। कक्षाहरू एक बैठक स्थितिमा धेरै समय खर्च गर्ने, वा कम्प्युटर मा ती लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प हुनेछ। लोड एक क्रमिक वृद्धि शुरुआती सुरू गर्न मद्दत र आफ्नो शरीर निर्माण हुनेछ। साथै, यो धेरै प्रयास बिना सबै मांसपेशी समूहहरु विकास गर्न ढिलो तर स्थिर गति मा मदत गर्नेछ। बकवास - छ धैर्य, बल र आत्मविश्वास। पिलेट्स सिस्टम - यो तपाईंको स्वास्थ्य, युवा र सौन्दर्य हो।
को विभाजन गर्न सिक्न कसरी
डिस्क स्वास्थ्य - सबै उमेर समूहका लागि व्यायाम
तिब्बती व्यायाम "आँखा पुनरुद्धार।" पाँच अभ्यास
घरमा stretching - मांसपेशिहरु र बंधन को बलियो बनाउँछ
टमस Rosicky - यो साना Mozart को इतिहास
अक्सर hiccuping बच्चा - यो एक अवसर आपतकालीन चिकित्सा ध्यान खोज्नुपर्छ छ?
"Catwoman": अभिनेताहरु, प्लट, पुरस्कार
आधुनिक राजनीतिक, सार्वजनिक संगठनको रूपमा पार्टी शक्ति लागि प्रयास
प्रोटीन: जैविक भूमिका। शरीर मा प्रोटिनको जैविक भूमिका
मूल व्यञ्जनहरु: porcine कलेजो को सलाद। porcine कलेजो तहहरू नुस्खा को सलाद
एक साईट सवार को विकल्प - "मिन्स्क एम 125"
मासिक धर्म किन सुरु हुन्छ र यस परिस्थितिमा मैले के गर्नु पर्छ?
भोयला cornuta: कृषि मशीनरी र बगैचा डिजाइन प्रयोग
पाठ संग एसएमएस ( "मेघाफोन") विवरण: कसरी गर्न?
Sauerkraut संग धुनमा